Linux Mint 20.2 inotanga kusimudzira, uye LMDE 4 inogamuchira kugadzirisa kubva 20.1 | Linux Vakapindwa muropa
Linux Mint 20.2 inotanga kusimudzira, uye LMDE 4 inogamuchira zvinowedzera kubva 20.1
Pakutanga (kana kurudyi kumagumo) emwedzi wega wega, mutungamiri weprojekti yeint-flavored Ubuntu-based kugovera inoburitsa tsamba rinotsanangura mafambiro ari kuita zvinhu uye nezvavari kushanda. TO Pakupera kwaZvita, nhau dzakatanhamara zvikuru ndedzekuti Linux Mint 20.1 yakanga ichizononoka nekuti hazvisi zvese zvakashanda zvakakwana pazvikwata zvese. Maawa mashoma apfuura atumira imwe tsamba, panguva ino ipfupi kwazvo isingazofadze chero munhu zvachose.
Pasina mubvunzo, chinonyanya kukosha ndechekuti Linux Mint 20.2 budiriro yatotanga, inotevera yekuvandudza iyo isati iine kodhodhi kana zuva rakarongerwa kuburitswa. Tichitarisa kuburitswa kwakapfuura, zita rayo rinotarisirwa kutanga na "U", uye rinofanira kusvika muzhizha, pamwe muna Chikumi. Izvo zvakare zvinotarisirwa kuenderera zvichibva paUbuntu 20.04, asi zvichawedzera maficha nyowani akave akaverengerwa mune dzimwe dzichangoburwa dzokororo.
Linux Mint 20.1 yaive nekuburitswa kukuru
Kunyangwe zvakaitika kwapfuura kupfuura zvataitarisira, Linux Mint 20.1 yaive nekuburitswa kukuru. Kwidziridzo 20 yakavhurwa uye zvese zvitsva maficha uye zvigadziriso zvakatumirwa muLinux Mint 20.1 zvakaendeswa uye kusundidzirwa kuLMDE 4.
Isu takashanda nekugadzirisa zvimwe zvapashure-zvekutanga zvange zvamboonekwa panguva yeBETA chikamu uye tichiri kuongorora akati wandei zvine chekuita nenyaya dzeplymouth neLUKS, resolution dzeNVIDIA, uye lag shoma panguva yekuteedzana kwekupinda.
Lefebvre akataura zvakare kuti Linux Mint 20.1 zvigadziridzo zvakaunzwa LMDE 4, ndiko kuti, iyo vhezheni yeLinux Mint iyo yakavakirwa zvakananga paDebian (uye kwete Ubuntu seyakanyanya vhezheni). Chekupedzisira asi chisiri chidiki, ivo vari kushanda kugadzirisa dzimwe nyaya dzavakasangana nadzo mushure mekuburitswa kwakatsiga, senge lag panguva yekuteedzana kwekupinda.
Pakupera kwemwedzi watichangobva kuburitsa, kana kutanga kwaKurume, Lefebvre achaburitsa imwe tsamba, uye tinovimba kuti panguva ino kuchave nezvakawanda zvekutaura, senge zita iro 20.2 ichatakura kana imwe yacho nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Mint 20.2 inotanga kusimudzira, uye LMDE 4 inogamuchira zvinowedzera kubva 20.1
Ichokwadi ndechekuti ini ndakagumbuka neLinux Mint.
Yaigara iri yangu yaanofarira distro, zvakanyanya zvekuti yaive nekuda kwayo ndobva ndafunga kutora nhanho yakananga Gnu Linux. Iyo ine zvakawanda zvinokodzera: Windows-senge nharaunda, kushomeka sosi yekushandisa, kugadzikana, kumashure kumashure kuenderana, uye yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika.
Zvisinei nezviri pamusoro, kubva mushanduro 20 yakatanga kundipa matambudziko, mamiriro akasimbiswa neLinux Mint 20.1 sinamoni. Pandakanga ndichida kuiisa, iyo grub yakandikuvadza, kunze kweizvozvo ndaive nematambudziko nemutyairi wekadhi rangu reNvidia.
Ini ndinoshandisa Gnu Linux kwete chete yezororo asi, zvakanyanyisa, kune basa rezuva nezuva. Iniwo handisi geek asi mushandisi-wekupinda mushandisi uyo anotarisira anoshanda system kuti aite sezvaanofanirwa.
Mukupererwa ndakatendeukira kuna Zorin Os. Iyo yakagadzirisa iyo grub kwandiri isina matambudziko uye yakaisa chaiyo mutyairi wekadhi rangu revhidhiyo. Zvinonakidza zvinoitika naZorin Os. Iko kugovera kusingakoshese uye kutaurwa nharaunda. Asi zvakadaro zviripo uye, zvirinani kwandiri, hazvina kumbondigumbura.
Ndine urombo nezvakaitika kwauri neLinux Mint, asi kune zvakawanda zvinhu zvinogona kukonzera kuti uve nezvikanganiso; Zvisinei, ini pachangu handina kumbopa zvikanganiso kubvira pandinoishandisa kubvira vhezheni 17 uye kubvira ipapo ndinogara ndichigadzirisa neyekuvandudza maneja uye kwete kubva ku0, sezvinoitwa nevamwe vashandisi vanotya neyekuvandudza maneja.
Mhoro Ignacio, zvakanaka kana uchinyatso kutaura ndiri zvakare mushandisi wekushandisa uye ini ndinoshandisawo Linux mint sehwaro hwezvinhu zvese neWPS yeoffice automation, vhezheni 20 yakasvika ine zvikanganiso zvakawanda ini ndaifanira kudzokera kushanduro 19.3 sinamoni uye kubva pano Ini ndinoshandura kana iyo 20.3.
Kukwazisa zvine hushamwari pamberi, kusvika pari zvino zvese zvinoshanda sezvazvinofanirwa kuve, kunze kwekunge uine ruzivo nezwi rinogumbura painotanga uye kurodha (ruzha runoita kunge rwunogogodza vatauri kubva panyanga). Zvese zvinoshanda mushe uye mushe. Kufara nekuparadzirwa uku.
Zvakanaka, heino zvakanaka!
Asi, ini ndingade kuti ive neiri nani, yemazuva ano theme !!
Pindura kuna Rw
Libgcrypt: GPG raibhurari ine yakaoma kunetseka